02/11/2015 – Gentleman Magazine
တစ်သက်လုံး အကျိုးပြန်ပေးသွားမယ့် ခက်ခဲတဲ့ အလုပ် ၉ ခု
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မနှစ်သက်တဲ့ အရာခြင်း မတူကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ သက်သက်သာသာ နေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေထက် ကျော်လွန်ပြီး အလုပ်လုပ်တာဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်ဆိုတာတော့ လူတိုင်း သဘောတူကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ တစ်ပါတ်ကိုတစ်ခေါက် ခက်ခဲတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ရှာပြီး လုပ်တာပါ။ ကြာလာရင် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲကို
ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး သူဌေးဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကို လွယ်မယ်ထင်ပါသလား။ မလွယ်ပေမယ့် ဒီလိုနည်းနဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတွေ တကယ်ရှိပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းတွေက ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို သင့်ကိုအောင်မြင်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာမှာ သေချာပါတယ်။ ၁။ စိန်ခေါ်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။
တနင်္လာနေ့တိုင်း တွေးမိတတ်တဲ့ အတွေးများ
ဘ၀ဆိုတာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ဒီလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀ထဲမှာမှ တနင်္လာနေ့တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပိုပြီး စိတ်ပင်ပန်းစေတယ်လို့ ထင်မိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ တနင်္လာနေ့တွေက ကျွန်တော်တို့ဘ၀ကို ပိုဆိုးစေတဲ့အကြောင်းရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တနင်္လာနေ့နံနက်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အများစုက အခုဖော်ပြထားတဲ့ အတွေး(၁၀)ခုထဲက တစ်ခုခုကို တွေးမိတယ်ဆိုတာကိုတော့ သင်ဝန်ခံလိုက်ပါ။ ၁။ မနက်တိုင်းအစောကြီးထရတာကို ငါ အရမ်းမုန်းတာပဲ။
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကိုယ်ပျော်တာသာ လုပ်ပါ
တစ်ခါက သူတောင်းစားအဖိုးအိုတစ်ဦး ရှိလေသည်။ အဖိုးအိုသည် နံနက်တိုင်း အိပ်ရာမှထသည်နှင့် ရထားစီးကာ မြို့လယ်ခေါင်သို့သွားရောက်ပြီး လမ်းထောင့်တစ်ခုတွင် ထိုင်ကာတောင်းရမ်းလေ့ရှိသည်။ အဖိုးအိုသည် သူ့ဘ၀၏ နေ့ရက်တိုင်းကို တစ်ပုံစံတည်းဖြတ်သန်းနေခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်နေရာတည်းမှာ ထိုင်ပြီး တောင်းရမ်းနေသည်မှာ နှစ်(၂၀)နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အဖိုးအို၏နေအိမ်မှာ ရှုပ်ပွညစ်ပတ်နေပြီး အနံ့ဆိုးများလည်း ထွက်နေလေ၏။ အိမ်နီးနားချင်းများက ထိုအနံ့ဆိုးများကို မခံမရပ်နိုင်တော့သဖြင့်
လူချမ်းသာတွေမှာ တွေ့ရတတ်သည် စိတ္တဇဝေဒနာရှင်အကျင့်စရိုက်များ
အကောင်းအဆိုးဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့တဲ့ စိတ္တဇဝေဒနာရှင်တို့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေဟာ အောင်မြင် ချမ်းသာနေသူတွေမှာလည်း ရှိတတ်တယ်ဆိုရင် သင်လက်ခံနိုင်ပါ့မလား။ လူချမ်းသာတိုင်းဟာ စိတ္တဇ ဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လေ့လာမှုတွေအရ လူချမ်းသာ အယောက် (၁၀၀)မှာ (၄)ယောက်လောက်က စိတ္တဇဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ စရိုက်ချင်းတူညီနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ္တဇဆန်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရှာဖွေနိုင်ဖို့ အကြောင်းတရားတွေ
ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ချွေတာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ိကို ချွေတာတတ်တဲ့ မိဘ ၂ ပါးက မွေးဖွားပေးခဲ့ကြတယ်။ မလိုတဲ့မီးတွေပိတ်၊ ရေကို ချွေတာသုံး၊ ပိုက်ဆံကို မဖြုန်းနဲ့ ဆိုတဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတာပါ။ ဈေးဘယ်လိုဆစ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုညှိရမယ်ဆိုတာကို ကျွန့်တော့်လူကြီးဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးခဲ့တာပါ။ ချွေတာတာက
သီတင်းတစ်ပတ်ရဲ့ တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် နှစ်သစ်တစ်နှစ်ရဲ့အစမှာ အခုချိန်ကစပြီး ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ဖူးပါသလား။ ဥပမာပြောရင် ဒီနေ့ကစပြီး ငါ ၀ိတ်ချမယ်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်၊ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပေမယ့် အချိန်တစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ အရာအားလုံးဟာ ဘာမှထူးခြားမလာပဲ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုး ဖြစ်ဖူးမှာသေချာပါတယ်။ ဘာကြောင့်များ ဒီလို စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားရတာပါလဲ။ အဖြေကတော့ အပျင်းကြီးလို့၊
ဉာဏ်ကောင်းသူတွေရဲ့ ဘုံတူညီချက် ၇ ချက်
အိုင်စတိုင်း၊ ရှတ်စပီးယား၊ မဒမ် မာရီကျူရီ သူတို့အားလုံးမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ လူသားတွေကို အကျိုးပြုခဲ့ပုံခြင်းလဲ မတူညီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တဲ့ ထူးချွန်တဲ့သူတိုင်းမှာ ဘုံတူညီနေတဲ့ အချက်လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ၁. အပြောင်းအလဲကို လက်သင့်ခံနိုင်ပါတယ် ဉာဏ်ကောင်းသူတွေဟာ ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်ရှိပြီးတော့ အခြေအနေမျိုးစုံကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူတွေဟာ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ အမြင်တွေကို စဉ်းစားပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကိုယ်ကောင်းဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲ ကြည့်တတ်တဲ့ အတ္တကြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီလို တစ်ဘို့တည်းသမားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်း(၉)ခု ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ကိုယ်နေပါ။ သူတို့နဲ့ တန်းသွားမညှိမိပါစေနဲ့။ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်ဆံရတိုင်း သင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ အရင်ဆုံးသတိထားရမှာက
အိုင်ဒီယာတွေကို ဝေမျှပေးရတာ လက်ဖျောက်တီးသလောက် မလွယ်ပါဘူး။ အိုင်ဒီယာတစ်ခုထဲကို ထပ်ခါထပ်ခါကြားနေရရင်တော့ သတိထားမိလာကြပါတယ်။ စကားပြောတဲ့အခါ မအောင်မမြင် ဖြစ်နေပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ကို စကားပြောနည်းကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တစ်ယောက်က သူမစကားပြောတဲ့အခါ သုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြထားပါတယ်။ ကောင်းလွန်းလို့ ပြန်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. သင်က သင်ပဲ ဖြစ်နေပါစေ စကားပြောတဲ့သူတွေကို သူများတွေကို လိုက်တုပြီး